Забур 137 CARS - Nnwom 137 AKCB
1Babilonia nsubɔnten ho, ɛhɔ na yɛtena suu
bere a yɛkaee Sion no.
2Ɛhɔ konkɔn so nnua mu
na yɛde yɛn asanku sensɛnee,
3ɛhɔ na yɛn nnommumfafo kaa se yɛnto nnwom,
yɛn ahohiafo hwehwɛɛ anigye nnwom fii yɛn nkyɛn;
wɔkae se, “Monto Sion nnwom baako nkyerɛ yɛn!”
4Ɛbɛyɛ dɛn na yɛatumi ato Awurade nnwom,
bere a yɛwɔ ananafo asase so?
5Yerusalem, sɛ me werɛ fi wo a
ma me nsa nifa werɛ mfi sankubɔ.
6Sɛ mankae wo a,
ma me tɛkrɛma nka ntare mʼanom
sɛ mamfa Yerusalem
sɛ mʼanigyede kɛse pa ara a.
7Kae, Awurade, nea Edomfo yɛɛ
da a Yerusalem hwee ase no.
Wɔteɛɛ mu se, “Munnwiriw,
munnwiriw ngu fam nkɔka ne fapem!”
8Ɔbabea Babilonia, wɔadome wo akɔ ɔsɛe mu,
nea otua wo ka bio ani gye
wɔ nea wode ayɛ yɛn no ho.
9Nea ɔkyere wo nkokoaa
de wɔn dwiradwira abotan no ani gye.
AKCB : Nnwom 137